आज सूर्यग्रहण, कुन राशिले हेर्न मिल्ने कुन राशिले नमिल्ने ? » बुद्ध भूमि नेपाल
टोखामा सलह मार्नेलाई प्रतिकिलो रु ५० दिने !
भारतमा एकैदिन २० हजार काेराेना संक्रमित फेला, संक्रमितकाे संख्या ६ लाख नघ्याे
बारामा चट्याङ लागेर दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते
कागेश्वरी मनोहरामा दुई जना झुन्डिएको अवस्थामा फेला, पासो एउटै !
अमेरिकामा एकै दिन ५० हजार भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि !
कोरोना संक्रमणको आशंकामा ४७ बाख्रालाई क्वारेन्टिनमा राखियो (भिडियो सहित)
आमिर खानको टिमका ७ जनामा कोराना संक्रमण
Home/आस्था/विश्वाश/आज सूर्यग्रहण, कुन राशिले हेर्न मिल्ने कुन राशिले नमिल्ने ?
काठमाडौं- आषाढ कृष्ण औँसीका दिन आइतबार खण्डग्रास (आधा सूर्य ढाक्ने) सूर्यग्रहण लाग्दैछ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अनुसार ग्रहणले बिहान १०ः५० बजे स्पर्श गर्नेछ।
मध्याह्न १२ः३८ बजे मध्य र अपराह्न २ः२३ बजे ग्रहणले मोक्ष प्राप्त गर्ने समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । तीन घण्टा ३३ मिनेटसम्म नेपालबाट सूर्यग्रहण देखिने उनले जानकारी दिए ।
वैज्ञानिक मूल्य मान्यता अनुसार सुरक्षित तरीकाले सबैले ग्रहण हेर्न सकिने पनि नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले बताए ।
ग्रहण हेर्न बनाइएको विशेष चस्माको प्रयोग गरी ग्रहण हेरेमा कुनै नोक्सानी हुँदैन । सूर्यग्रहण हेर्ने अत्यन्त सुरक्षित तरिका सूर्यविम्बको प्रतिविम्ब बनाई छाया हेर्नु नै हो ।
ग्रहण सम्बन्धी अन्धविश्वास संसारभरी नै रहेको पाउन सकिन्छ । रोमन ग्रहणका वेला चिच्याउने गर्दछन् भने चीनमा ग्रहण र ड्र्यागन सँगको सम्बन्धमा विश्वास गर्दछन् । प्राचीन मिश्रका राजा आफैँ सूर्यवंशी थिए । सूर्यग्रहणका वेलामा उनी शहरको मुख्य मन्दिरमा परिक्रमा गरिरहन्थे भन्ने इतिहास भेटिन्छ ।
सूर्यग्रहण हेर्न चाहनेलाई तक्षशिला एष्ट्रोनोमिकल क्लवले सामाखुसीस्थित कलेजको छतबाट निःशुल्क तथा सुरक्षित तरिकाबाट भौतिक दूरी कायम गरी हेर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।
असार छ गते साँझ सात बजे सूर्यग्रहण विषयमा जिज्ञासा हुनेले सोसाइटीका विज्ञसँग प्रश्न राख्ने अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।